Izandiso zeArgGIS - i-Geofumed
NgoFebruwari, 2008 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS
Kwithuba langaphambili si hlalutyile Iiplatifti ezisezantsi zeDeskithophu ye-ArcGIS, kule meko siza kuhlolisisa izandiso eziqhelekileyo ze-ESRI. Ngokuqhelekileyo intlawulo nganye isongezwa kwi-1,300 ye $ 1,800 ngepc.
Ncitshisa i-GPS Analyst ye-ArcGIS
Olu lwandiso lugcizelela le nkqubo yokuzisa idatha evela kwintsimi kwikhabhinethi evumela ukuba ulwazi lugcinwe ngqo kwi-geodatabase. Kwaye ngenxa yokuba umhlalutyi weGPS uza kunye neplani yokulungiswa kwendlela eyahlukeneyo, emva kokuqhutyelwa kwedatha kungaqinisekiswa, okuphucula umgangatho wolwazi mhlawumbi ngokusebenzisa ulwazi oluvela kwi-GPS esetyenziswe njengesiseko sokukhutshwa kwi-Intanethi.
I-ArcGIS 3D Analyst
I-ArcGIS 3D Analyst ivumela ukubonakalisa ngcono nokuhlalutya kwedatha ngeempawu zomhlaba. Ungabona imifuziselo namageduka yedijithali zeemo ezahlukeneyo, buza imibuzo, ukugqiba ngeyona iyabonakala ukusuka kwindawo ethile, ukwenza imifanekiso ngeenkolelo eziyinyani idlulela UAN umfanekiso yeraster indlela phezu komhlaba uze ugcine iindlela Access tridimencional ngokungathi eziphaphazelayo phezu komhlaba .
I-ArcGIS yoHlolo loShishino
Olu longeza luzisa izixhobo ezizodwa zokusetyenziswa kwi-shishini lokuthengisa, ukwenzela ukubonelela ngamashishini ngezigqibo ezinengqiqo ezinxulumene nokukhula, ukwandiswa kunye nokhuphiswano olunjenge:
Yazi apho abathengi okanye abanokuthenga khona
Chaza indawo yeempembelelo zoshishino
Ukuqhuba uhlalutyo lokungena kwimarike
Yenza imizekelo yeendawo ezinokuthi zisebenze ngamashishini amatsha
Yenza uhlalutyo lweendlela zokuqhuba umzila wenethiwekhi yelizwe
Ukudibanisa idatha ye-geographic ekhoyo kwi-Intanethi
I-ArcGIS Geostatical Analyst
Oku kunokongezwa kweDeskithophu ye-ArcGIS (ArcInfo, ArcEditor kunye ne-ARcView) enika izixhobo ezahlukeneyo zokuhlola idatha yendawo, ukuchongwa kwedatha engabonakaliyo, ukubikezela nokuvavanya kokungaqiniseki kokuziphatha kwedatha; Ezi ziyakwazi ukuguqulwa zibe yimodeli kwaye zihanjiswe kwiindawo.
Umshicileli we-ArcGis unikezela amandla okwabelana kunye nokusabalalisa imephu kunye nedatha ye-GIS. Oku kwandiswa kwongeza i-ArcGIS Desktop kwisakhiwo ngexabiso eliphantsi lokupapashwa kwedata; usebenzisa olu longeza unokwenza iifayile .pmf kunoma iyiphi ifayela .mxd. Iimephu ezipapashiweyo zingabonwa kusetyenziswa nayiphi na imveliso yedeskithophu ye-ArcGIS kuquka i-ArcReader, eyisixhobo samahhala, ukuze ukwazi ukwabelana ngolwazi ngohlu olubanzi lwabantu okanye abasebenzisi.
I-ArcGIS Spatial Analyst
Uhlalutyo lwendawo lufaka isethi yezixhobo eziphambili zokumisela indawo kwii-Desktop ze-Desktop ze-ArcGIS, ukwenzela ukuba amephu amasha aveliswe kwiinkcukacha ezikhoyo. Kwakhona kuncedo kakhulu ukuhlalutya ubudlelwane bendawo kunye nokwakhiwa kweemodeli zedatha zendawo ezihlanganiswe nezinye izixhobo zokuhlalutya indawo ezifana noku:
Fumana iindlela eziphambili phakathi kwamanqaku amabini
Fumana indawo kunye neemeko ezizodwa
Ngaba uhlalutyo lwezovini kunye ne-raster
Unokwenza uhlalutyo lweendleko-zenzelwe ukulungisa ubude
Ukuvelisa idatha entsha usebenzisa izixhobo zokucwangcisa umfanekiso
I-Interpolate ixabiso leenkcukacha ekufundeni iinkalo ngokusekelwe kwimimiselo ekhoyo
Ukucoca iintlobo ezahlukeneyo zolwazi oluhlalutyo okanye ukuthunyelwa
I-ArcGIS StreetMaps inikeza izixhobo zokudibanisa idatha yeedilesi kwiindlela zeendlela kwilizwe. maleko StreetMap Ukulawula ngokuzenzekelayo tag kunye neempawu amanani ezimise esetyenziselwa lokuzazisa zelizwe ezifana ezitalatweni, iipaki, amanzi, kunye nezinye nemiqondiso. ArcGIS StreetMap uye izakhono zolawulo ngokusebenzisa iidilesi geocoding (gama elo lizwe a nokuhlelwa ubhalo), ngokusebenzisa uhlanganiso interactive iidilesi ngamnye ngenkqubo enkulu yokuchonga izinto ekuboneni indlela.
Unokufumana iadereyiphi naphina kwinethiwekhi yomnatha
Ukudala iimephu zeemaphu
Ukuchongwa kwemizila phakathi kwamanqaku amabini okanye kwindlela yokuthungatha indlela yeso sixeko okanye phakathi kweedolophu zelizwe.
Umhlalutyi woPhando lweArgGIS
Oku kunokongezwa kweemveliso zedeskithophu ezikuvumela ukuba uphathe idatha yezobugcisa kwi-geodatabase, ukuze ukwazi ukubonisa idatha ebalulekileyo yokulinganisa kunye nezichasiso kwimephu.
Ekubeni idatha igcinwe kwiziko le-GIS, zombini iindidi kunye ne-polygonal, unokwenza iikhosi kunye nomgama wamanqanaba okanye ulungelelwaniso lweendawo ukwenzela ukuvelisa iimveliso zokugqibela. Ukongezelela, iifom zokutya zedatha kunye nohlengahlengiso oluqhelekileyo ezisetyenziswe kwimografu zifakiwe.
Uhlalutyo lwe-ArcGIS Tracking Analyst
Olu lwandiso lunika izixhobo zokuhlalutya uluhlu lweedatha kunye nokulungiswa kwemathematika. Uhlalutyo lolandelelwano lunceda ukubonisa i-sereies zedata eziyinkimbinkimbi, iipatheni zendawo kunye nokuhlaziywa kwedatha evela kwezinye iindawo, rhoqo kwi-ArcGIS.
Imidwebo esekelwe kwiipatheni okanye kwimigangatho
Jonga iipateni zolwazi lwemozulu
Ukudibanisa idatha ngexesha kwi-GIS
Ukuphinda kusetyenziswe idatha ekhoyo ye-GIS ukudala nokubonisa uluhlu lwexesha
Yakha imephu yokuhlalutya utshintsho kwixesha lembali okanye ngexesha langempela.
Injini ye-ArcGIS ngumveliso wabathuthukisi, apho ungenza khona izicelo ze-GIS zokusebenzisa idesktop. ArcGIS Injini ibandakanya isethi izakhi ArcGIS yakhiwa, nale ungakha izicelo okanye ukwandisa ukusebenza ekhoyo ngokubonelela izisombululo kwabasaqalayo okanye abasebenzisi phambili ngokusetyenziswa kweenkqubo zolwazi lobume.
Injini ye-ArcGIS inikezela ukusetyenziswa kwee-interfaces zeprogram (API) ze-COM, .NET, Java kunye neC ++. Ezi APIs azibandakanyi amaxwebhu acacisiweyo kodwa zibandakanya uchungechunge lwezixhobo ezibonakalayo ezibonakalayo ezenza kube lula kubaphuhlisi ukwakha izicelo ze-GIS.
Esi sixhobo sivumela ukudala amanxibelelwano enxibelelwano olude kunye nokuvelisa izisombululo zendlela. Uhlalutyo lweNethwekhi lusetyenziso olukhethekileyo lweendlela kwaye lubonelela ngendawo yokuhlalutya kwendawo esekelwe kumanethiwekhi, njengokuhlalutya indawo, iindlela zokulawula kunye nokudibanisa imodeli yendawo. Oku kwandisa kwandisa i-Desktop ye-ArcGIS ukubonisa umzekelo weemeko zendlela zendlela okanye izinto ezicatshulwayo; Unokwenza izinto ezinje:
Uhlalutyo lwexesha lokucwangciswa komzila
Imizila ukusuka kwindawo ukuya kwindawo
Inkcazo yeendawo zokuncedisa iinkonzo
Uhlalutyo lokulungisa indlela
Ezinye iindlela eziphakanyisiweyo
Izicelo ezivela kumvelaphi
I-ArcGIS Network Analyst inikezela abasebenzisi be-ArcGIS izixhobo zokusombulula iingxaki ezahlukahlukeneyo zisebenzisa amanethiwekhi endlela. ImiSebenzi efana nokufumana indlela ehamba phambili yokuhamba, ukudala izikhokelo zokuhamba, ukufumana indawo ezenzakaliso okanye ukuchaza iinkalo zenkxaso ngenkonzo ezisekelwe kwixesha lokuhamba.
I-ArcGIS Schematics iyisisombululo esitsha sokwenza izinto ezizenzekelayo kwiimpawu ze-geodatabase ezivela kwi-ArcGIS. Olu longeza luvumela ulawulo olungcono kunye nokubonakaliswa kwamanethiwekhi edibeneyo kunye neenqobo ezinjengegesi, umbane, iindlela zokupasa, amanzi okusela kunye nocingo.
I-ArcGIS Schematics inikeza imigangatho yokubonisa ukubuyiswa kotyalo-mali kwisitshixo (isitshixo ngokuzenzekelayo kunye nobuncedisi bokuyila). Oku kuvumela ukujonga ngokukhawuleza koxhumano ngaphakathi kwintanethi kwaye kulula ukuqonda ubuchule bokubakho kwenethiwekhi kwisigqibo esiphuthumayo kumjikelezo wokuhambisa owenziweyo kwaye ugxile ekubonweni kwendawo yonke yenethiwekhi.
I-ArcPress ye-ArcGIS yinkqubo ekhethekileyo ekuveleni imifanekiso emihle yokushicilela izinga eliphezulu kokushicilela kunye nokuthunyelwa. I-ArcPress iguqula iimephu kwiifayile kunye nolwimi lwabantu basekhaya abaprinta okanye abacebisi, nakwezinye iifomathi abaprinta abanokuphatha ngayo ukuhlukana kwemibala kunye nokutshiswa kwamacwecwe.
Porqeu ArcPress yenza yonke inkqubo esuka kwikhompyutha, kungekhona processing of umshicileli ekutolikweni, ukudluliselwa kunye nokugcinwa kwedatha iyafuneka, ukuphakamisa imveliso ngokukhawuleza uthumele evela maleko ngqo kwifomathi yomzobo okanye imilo, ngelixa uphucula umgangatho wokushicilela.
I-ArcPress ithetha ngendlela ethile yokugcina imali, kuba ngabaphrinta abanamandla ambalwa okusebenza kwimemori okanye yokugcinwa kunokwenzeka ukushicilela iimveliso eziphezulu zokuphelisa ii-PostScript.
I-ArcScan isandiso seDeskithophu ye-ArcGIS evumela umsebenzi osebenzayo ekuguquleni kwe-raster kwiifom ze vector, ezifana neemephu ezifundwayo ezifuneka zifakwe kumatshini. Nangona iimveliso ezixubileyo zilula ukuzenzekelayo, le nkqubo inika izixhobo ezithile ekuphatheni amathoni kunye nokudibanisa umbala ongakhokelela ukukhishwa kwesigcaziso se-non-monochromatic data.
Abasebenzisi banako ukukhulisa ukusebenza kwe-data post-processing ngokudala iivectors ngezixhobo ngesandla okanye ngokuzenzekelayo.
Iinkqubo zokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo ngezinga eliphezulu lokuchaneka
Ukudala iifayile kunye nobuchule befayile yesimo phantsi kweenkqubo zokusebenza ze-Desktop ze-ArcGIS ezisele zize zilethe ukuze kuphuculwe ukuhlambulula i-topological and data continuity.
Unokuphinda usebenze imifanekiso ukulungiselela ukubonakala ukuba kufuneka ukulandelwa kwemifanekiso.
I-ArcWeb Iinkonzo inikeza ukufikelela kokubambisene ne-GIS kunye nezinto ezinokufunwa kwi-data ukususwa kwedatha okanye ukufunyanwa kwemali eninzi.
Ngeenkonzo ze-ArcWeb, ukugcinwa, ukugcinwa nokuhlaziywa kwedatha kuphathwa ngendlela elawulwayo. Ngoko iyakwazi ukufikelela ngokuzenzekelayo usebenzisa i-ArcGIS okanye ngeeNkonzo zeWeb kwizicelo ezakhelwe i-Intranet okanye i-Intanethi.
Fumana i-Terabytes yedatha ngokufanayo naphi na
Ukunciphisa izindleko zokugcina nokugcina
Ukusetyenziswa okulula kwedatha yedatha kwizicelo ze desktop okanye phantsi kwemoya yewebhu.
Idilesi ye-geocoding ngobuninzi (batch)
Esi sisisombululo se-ESRI sokuthunyelwa kweemaphu kunye neenkonzo zedatha ezinamandla ngewebhu. I-ArcIMS inikezela indawo engabonakaliyo yokupapasha imephu ngaphakathi kwi-Intranet ye-intanethi okanye nge-intanethi.
Ngalolu hlobo ungakwazi ukufikelela uluhlu olubanzi lwabathengi kubandakanya abasebenzisa izicelo zewebhu, ideskithophu ye-ArcGIS kunye neenkonzo zesevisi yeselula. Kwakhona izixeko, oorhulumente, amashishini kunye nemibutho ehlabathini jikelele banokushicilela, kuphando kunye nokwabelana ngolwazi lwe-geospatial. Ezi nkonzo zingenziwa ngezinga le-ArcGIS, okanye nge-ASP imigangatho enokusetyenziswa yi software evela kwamanye amashishini.
Ukubonisa okubonakalayo kweemaphu kunye nedatha ngewebhu
Ukudala phantsi kokusingqongileyo kokusetyenziswa kwemizila ejoliswe kwimigangatho yoshishino lophuhliso lwewebhu.
Yabelana ngolwazi nabanye ukugqiba imisebenzi yokusebenzisana
Ukuphunyezwa kwee-portals ze-GIS
ArcIMS njengoko mvume umntu Ibiza malunga $ 12,000 nangona okwangoku ESRI uthengisa ArcServer, kuquka oko baba ArcIMS ($ 12,000), ArcSDE ($ 9,000) kunye MapObjects ($ 7,000), ezi ngoku kwi ArcServer zibiza malunga $ 35,000 ngu projekthi. Kungekudala le nkqubo yokulayisenisa itshintshile ukunciphisa ukuphazamiseka kwentlawulo ngomprojekti kwiseva.
Kwakhona ngelinye ixesha senza ukuthelekiswa kwamanye amathuluzi IMS, GIS, kunye nesofthiwe I-GIS yamahhala.
Post edlulileyo«Edlulileyo Imveliso ye-ESRI, yintoni na yona?
Post Next Intsapho yeCadCorp yemvelisoOkulandelayo "
Iimpendulo ze-7 "Izandiso zeArgGIS"
Ndiyabonga entsha, ndaye ndahlola i-manual ukuba ndiyilole kwaye ndiyihlele, emva kokuyidala kwaye nangemva kokungeza imobo eyadalwa yi-IGN, xa kusebenze umhleli, akukho nanye yezixhobo zalo mgca we-editor osebenzayo, le nkqubo ilayisenisi, ndicinga ukuba akunjalo
UROBINSON PROAÑO uthi:
ndincede ndidale amanethiwekhi ombane.
I-AutoCAD Land iyisicelo esakhelwe kwi-Survey Survey, esekelwe kubunjineli bezobugcisa: ulwaphulo-mhlaba kunye noyilo lweendlela (phakathi kwabanye).
Nantsi ikhonkco onokuyifunda
Njengokuba ndiyazi, akukho nkqubo ebizwa ngeArgGIS Geodata.
I-ESRI ibiza i-geodatabase, indlela yokugcina idatha yendawo kwindawo egciniweyo.
JESSICA IBARRA GONZALEZ uthi:
Ndifuna i-inform.por fis
Ndinqwenela ukuba ndifumane ulwazi kuzo zombini iinkqubo ze-Ardis_geodata kunye nomhlaba we-autocad
Ndiyongeza esinye isandiso esisebenza ku-Erdas: umhlalutyi we-LIDAR